iPhone SMS dhoofinta - kaabta aad SMS iPhone on PC Mac / Windows
> Resource > iPhone > Sida loo dhoofiyo SMS ka iPhone
Ma doonaysaa inay u dhoofiyaan fariimaha ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS si ay u helaan oo Akhriya aad Mac ama Windows PC? Waxaad u timid inaad meel sax ah. Maqaalkani waxa aad ku socon doonaa, iyada oo sida ay u dhoofiyaan iPhone SMS u gurmad on your computer. a
Backing ilaa fariimaha qoraalka ah iPhone waa quruxsan fudud. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in uu u tartamo Lugood, xiriiriyaan iPhone iyo xaq riix magaca qalabka uu dib up. Laakiin dhibaatadu waxay tahay marka aad ka heli file gurmad ah, ma aad heli karto ama ay u akhriyaan, iskaba daa Macdan SMS ah oo ka soo baxay waxaa ka mid ah.
Si loo xaliyo arrinta, waxaad u tagi kartaa in laba barnaamij iPhone SMS dhoofinta caawimaad. Mid ka mid ah barnaamijka waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) , ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows), taas oo ka caawisaa inay soo saaro SMS ka gurmad iPhone oo ha idin ​​helaan oo akhriyaan si fudud. Kale waa Wondershare TunesGo (Windows). Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dhoofin iPhone SMS, MMS oo iMessages sida HTML, TXT ama file XML in Windows PC.
Xalka 1: SMS Dhoofinta ka iPhone la Dr.Fone ee macruufka
Xalka 2: Dhoofinta / gurmad SMS ka iPhone la TunesGo
Xalka 1: Dhoofinta iPhone SMS la Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Download version saxda ah ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka, sida ay nidaam looga baahan yahay, iyo waxa ay isku dayaan in si bilaash ah!
Tallaabada 1. Dooro gurmad iPhone si ay u soo saaro
Halkan, aynu qaadan Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac), tusaale ahaan. Dadka isticmaala Windows isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka in ay qaadaan tallaabooyinka la mid ah.
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka, waxa maamula on your computer. Markaas waxaad dooran kartaa habka soo kabashada aad rabto in aad isticmaasho. Halkan waxaan isku dayi la soo kabsado Lugood gurmad file hab.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad si toos ah baarista iPhone si ay u helaan farriimaha ee ku yaal, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPhone in computer iyo dooro hab kabashada labaad: kabsado Device macruufka .
Halkan, oo dhan Lugood gurmad files on your computer si toos ah ku qoran doonaa. Dooro gurmad aad iPhone iyo sii adigoo gujinaya Start Scan , inay soo saaro waxyaabaha ku jira.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha iyo SMS dhoofinta ka iPhone
Scan ka dib, aad mid mid ku eegaan karo fariimaha qoraalka ah oo dhan. Hubi Messages doorasho liiska item bidix si ay u dhoofiyaan iPhone SMS si aad Mac. Haddii aad dooneyso inaad ogaato content warbaahinta ku lifaaqan ee fariimaha aad, guji Attachements Message hoos Messages .
File ayaa SMS aad dhoofiyay gurmad waa file HTML ah. Waxaad heli kartaa oo ku haboon loo maareeyo, sida akhriska, daabacaadda, iwm Haddii aad isticmaalayso Wondershare Dr.Fone ee macruufka , waxa kale oo aad dhoofin karaan farriimaha ee qaabka CSV, ka dibna u soo dhoofsadaan in aad iPhone la qalab kala iibsiga sax ah . Waxaa intaa dheer, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows & Mac) ha karaan in aad si toos ah iskaan iyo kabsado fariimaha ka iPhone 5 , iPhone 4s, iPhone 4 iyo iPhone 3GS.
Download TunesGo on your computer. Skaanka tallaabooyinka fudud ee hoose.
Ku rakib berrito kadibna TunesGo kombiyuutarka. Markaas, isticmaali cable USB ah in la sameeyo xiriirka ka dhaxeeya aad iPhone iyo computer. Software Tani waxay aqoonsan doonaa iPhone. Ka dibna, waxaa tusi doonaa in aad iPhone ay info uu furmo suuqa priamry.
Tallaabada 2. iPhone SMS dhoofinta
Tag SMS khaanadda tagay. Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala SMS ah, kuwaas oo dhamaan fariimaha waxaa lagu muujiyey. Fiiri sanduuqka ka hor MMS doonayay, SMS iyo iMessages. Markaas, guji dhoofinta si on line ugu sareeya.
In liiska hoos-hoos u, dooran dhoofinta Messages soo xulay ama dhoofinta All Messages , sida ay doorashadaada. Markaas, liiska hoos-hoos labaad u muuqataa. Raadi badbaadiyo nooc ka si TXT File , si HTML File iyo in XML File . Save fariimaha on your computer.
Isku day TunesGo inay u dhoofiyaan dhoofinta iPhone SMS.
Sida loo soo celiya iPhone ama iPad ka kaabta Lugood